घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू लसिना टोरोर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो लसिना टोरोर बायोग्राफीले तपाईंलाई उनको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुन, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको तथ्य बताउँछ।
सरल शब्दमा भन्ने हो भने, हामी तपाईंलाई फुटबलरको एक संक्षिप्त जीवन कहानी प्रस्तुत गर्दछौं जुन शुरुका दिनहरूदेखि सुरु भयो जबसम्म उनी प्रसिद्ध भए। तपाईंको भोक मेटाउन, चित्रहरूमा लासिना टोरोरको बायोको सारांश जाँच गर्नुहोस्। निस्सन्देह, यसले उसको जीवन यात्राको कथा बताउँछ।
र सबैभन्दा पहिला हामी लासिना टोरोरले एक पटक एजेक्सको VVV भेन्लोको १-13-० को रद्दी टोकरीमा प्रदर्शन गरेको तीब्र हमलाइ प्रवृत्तिलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनौं। फेरी, खेलमा पाँच गोल गरे पछि सबैले मद्दत गर्न सक्दैनन् तर को हो भनेर अचम्म मान्दछन् न्यू जर्ज वेह हुन सक्छ। अब थप विज्ञापन बिना, हामी तपाईंलाई सुरुबाट उसको कथा सुनाउँछौं।
Lassina Traore बचपन कहानी:
जीवनी सुरु गर्नेहरूको लागि, फुटबलरले लामो नामहरू राख्छ; लासिना चाम्स्टे साउडाइन फ्रान्क ट्रोर। उनी जनवरी २००१ को १२ औं दिनमा बोबु डिउलासो, बुर्किना फासोमा एथलेटिक अभिभावकहरूसँग जन्मेका थिए। लासिना आफ्ना बुबा र आमाबीचको सफल मिलनबाट जन्मेका तीन बच्चाहरूको एक मात्र छोरा हो।
केहि अफ्रिकी देशहरूमा यो परम्परागत छ, लसिना अन्य बच्चाहरूसँग सडक फुटबल खेल्दा हुर्किन। त्यस पछि, उहाँ कहिलेकाँही उनकी आमाको अनुसरण गर्नुभयो, जो एक पेशेवर खेलाडी थिए, फुटबल मैदानमा। त्यहाँ, उहाँ निपुण खेलाडीहरू बलको साथ सबै प्रकारका तरिकाहरू प्रदर्शन गर्ने हेर्नुहुन्छ।
हुनसक्छ यो जवान केटाले आफ्नो आमालाई खेल्दै गरेको देखिन्छ। जे भए पनि उसको निर्णयको आधारमा, निश्चित छु कि उसले अन्य सबै क्यारियरमा खेल छान्दा पछुताउँदैन।
Lassina Traore परिवार पृष्ठभूमि:
युवा बुर्किनाबे स्टारले पिचमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको हेर्न हामी छक्क पर्नु पर्दैन। पहिलो स्थानमा, लसिना परिवारबाट आउँछिन् जुन फुटबलको साथ एक उत्कृष्ट ट्र्याक रेकर्ड छ।
मोरेसो, उनका बुबा, आमा र भतिजा फुटबल खेलाडीहरू थिए। तसर्थ, हामी अनुमान गर्न सक्दछौं कि उच्च शिल्प खेलकुद उसको शिराबाट आउँछ। त्यसमा कुनै आश्चर्य छैन कि लसिनाले आफ्नो पहिलो व्यावसायिक क्लब, अजाक्सको साथ एक अतुलनीय फुटबल सम्भाव्यता प्रदर्शन गर्न सक्षम भयो।
Lassina Traore परिवार मूल:
यद्यपि उनी युरोपको प्रतिष्ठित लिगमा खेल्छन्, आइकनिक अगाडि उसले सँधै आफ्नो जरा सम्झन्थ्यो। अवश्य पनि, उसको कालो छाला एक शंकास्पद प्रमाण हो जुन उनको अफ्रिकी वंशको सिर्जना देखाउँदछ।
के तपाईंलाई थाहा छ?… लासिनाको घर शहर, बोबो-डिउलासो बुर्किना फासोको दोस्रो ठूलो शहर हो। शहरले तिनीहरूका आधिकारिक भाषा (फ्रेन्च) पछि जुलालाई उनीहरूको सडक लिंगु -् फ्रांकाको रूपमा बोल्छ।
Lassina Traore Career कहानी:
ठीक समयदेखि नै, अफ्रिकी-प्लेयर फुटबलको साथ राम्रो छ। आफ्नो बाल्यकालका दिनहरूमा, टोरोर जहिले पनि धेरै स्थानीय प्रतियोगिताको शीर्ष स्कोररको रूपमा समाप्त गर्दछ। २०१२ मा नयाँ फुटबल क्लब स्थापना गर्ने उनका काका, रहीम ओएडेराओगोलाई धन्यवाद, लसिना आफ्नो प्रतिभालाई अर्को तहमा पुर्‍याउन सक्छिन्।
जब लसिना ट्रोर ११ वलियो, उनी आफ्नो काकाको एकेडेमी रहिमो एफसीमा भर्ना भए। नयाँ प्रशिक्षण केन्द्रमा, युवा स्ट्राइकरले अरू बच्चाहरूलाई भेट्टाए जो आफ्नो प्रतिभा भन्दा बढी प्रतिभाशाली थिए।
Lassina Traore प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
आफ्ना अभिभावकको सहयोगमा, लसिनाले आफ्नो जीवनका years वर्षहरू रहिमो एकेडेमीमा आफ्नो सीप विकास गर्न बिताए। जब बुर्किनाब खेलाडी १ocked सम्म पुगे, उनले दक्षिण अफ्रिकाको 16००० किलोमिटर यात्रा शुरू गरे र एजेक्स केप टाउन एफसीमा सामेल भए।
धेरै जवान भए पनि, उनको नयाँ क्लबमा लसिनाको प्रतिभाले उनी एक उत्कृष्ट खेलाडी थिए भन्ने तथ्यलाई प्रतिबिम्बित गरे। राष्ट्रिय टोलीमा उनको क्षमता कत्तिको आवश्यक छ भन्ने बुझेपछि बुर्किना फासो कोचले १ 16 बर्षे किशोरीलाई मे २०१4को th औं दिनमा बेनिन बिरूद्ध मैत्रीपूर्ण खेलमा भाग लिन ल्याए।
Lassina Traore जीवनी- प्रख्यात कहानी को मार्ग:
के लाग्छ?… युवा केटाले आफ्नो पहिलो दुई अन्तर्राष्ट्रिय क्याप्समा बुर्किना फासोको स्टालियन्सका लागि तीन गोल गरे। उसको आश्चर्यजनक प्रदर्शनले एजेक्सको ध्यान आकर्षण गर्यो। दुर्भाग्यवश, टोरोर एकदम मोटो थियो र उनले क्लबमा सम्मिलित हुनु भन्दा पहिले केही तौल कम गर्न आवश्यक थियो। तसर्थ, Ajax पेशेवर फुटबल मा एक जीवन परिवर्तन अनुभव को लागी उसलाई तयार गर्न कोच पठाए।
आफ्नो शरीरको शरीर सुधार गरे पछि लसिनालाई इंटर्नशिपको प्रस्ताव आयो जुन एजेक्समा ट्रायलको रूपमा देखिन्थ्यो। पछि, उसले बिरूद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्‍यो Matthijs de Ligt, जसले आफ्नो परीक्षण एकदम चुनौतीपूर्ण बनायो। पछि, उसले जनवरी २०१4को th जनवरीमा एजेक्ससँग साढे तीन वर्षको करार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
Lassina Traore सफलता कहानी:
नेदरल्याण्ड्स आइपुगेपछि उनले पहिलो चोटि जong्ग एजेक्सको लागि खेले र २१ गोलमा २१ गोल ​​गरे। पछि, ऊ एजाक्स पहिलो टोलीमा सम्मिलित भयो र उनीहरूलाई धेरै पुरस्कारहरू जित्न मद्दत गर्‍यो। अवश्य पनि, लसिनाको प्रदर्शन सनसनीखेज थियो, र उनको क्यारियर सफलता उनको आमा र दिदीहरूको हृदय आनन्दले भरियो।
यस बायो लेख्ने समयको अगाडि, लासिना टोरोर १ 1985 XNUMX मा डच च्याम्पियनशिपमा goals गोलहरू पुर्‍याउने मार्को भ्यान बास्टन पछि पहिलो एजेक्स खेलाडी बन्नुभयो। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
लसिना टोर प्रेमिका को हो?
त्यहाँ कुनै पनि तथ्यलाई इन्कार गरिएको छैन कि उहाँको मांसपेशी शरीर फिज, अवश्य पनि, धेरै महिला प्रशंसकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ। जे होस्, लसिना टोरले आफ्नो प्रेमिका वा सम्भावित पत्नीको परिचय प्रकट गर्नबाट पछि हटेका छन् जब पनि विषय पप हुन्छ।
जे होस्, बुर्किनाबे राष्ट्रियले उनी आफ्नो जीवनको सबै पक्षमा उत्कृष्ट छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न उनको अविभाज्य ध्यान दिएका छन् (जसमा उनको सम्बन्ध जीवन पनि समावेश छ)। आश्वासन दिनुहोस्, लसिना टोरर परिवारले उनलाई खुशीसाथ सहयोग गर्ने छ जब उसको पत्नीसँग बिहे गर्ने समय उचित छ।
Lassina Traore व्यक्तित्व:
घरबाट अहिलेसम्म आइकोनिक अफ्रिकी आक्रमणकारीले आफ्नो सम्पदाको निर्माणलाई बिर्सदैनन्। कहिलेकाँही, उत्सवको अवधिमा, लसिना प्रायः स्वदेशी बनाइएका लुगा लगाउँदछन् (कैफटन), जसले यस्तो देखाउँदछ कि ऊ आफ्नो परिवारको जराबारे पूर्ण रूपमा सचेत छ।
कुनै श doubts्का छैन, लासिनाको गोल स्कोरको लागि तीव्र भोकले उनलाई पिचमा वर्काहोलिकको रूपमा चित्रण गर्न सक्छ। यद्यपि उनले अन्य लक्षणहरू पनि देखाए जस्तै संवेदनशील, स्थिर र यथार्थपरक छन, जसले प्रमाण दिन्छ कि मैदानमा उसले चित्रण गरेको सबै उसको मकर राशिको लक्षण मात्र हो।
Lassina Traore जीवनशैली:
खेलकुदमा धेरै पैसा खर्च भए पनि, केही खेलाडीहरूले कम-मुख्य जीवन बिताएका छन्। त्यस्तै, लसिना टोरोर एक साधारण जीवन शैली बाँचिरहेकी छन् अजाक्सबाट उसको कमाई।
यस्तो देखिन्छ कि टोरोरसँग एउटा घरको स्वामित्व छ र एउटा विदेशी कार, वा अझ बढि स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्दछ। COVID-१ down लकडाउनको बेला, उनले आज्ञाकारी भई आफ्नो घरमा आराम गरे र सबैलाई पनि त्यस्तै गर्न प्रोत्साहित गरे।
Lassina Traore नेट वर्थ:
यसले सफल अफ्रिकी फुटबलरहरू लिए अन्डर ओन्नाना अथक धन कमाउन कडा मेहनतको एक ठूलो सम्झौता। उही शिरामा, लसिनाले आफ्नो आय सुधार्न र उसको नेट वर्थ बढाउनको लागि अजेक्समा स्कोर गर्दै र सहयोग पुर्‍याउनुपर्नेछ। हामी उसको जीवनी लेख्दाको समयमा उसको सम्पत्ति एक मिलियन यूरो भन्दा कम हुने मोल गर्छौं।
Lassina Traore पारिवारिक जीवन:
सायद तपाईलाई कहिल्यै थाहा भएन, सब भन्दा ठूलो उपहार जुन प्रासंगिकताको साथ उसको अस्तित्वको अनुभूति गर्छ त्यो नै हो जन्मजात फुटबल प्रतिभा। मोरेसो, किनकि उसको बुबाआमा दुबै कुशल खेलाडी थिए, टोरोर विश्वस्त छन् कि फुटबल उसको नसाबाट चल्छ। यस खण्डमा, हामी टोररको परिवारको बारेमा तथ्यहरू पत्ता लगाउनेछौं, जुन उनको बुबाबाट शुरू हुन्छ।
Lassina Traore बुबाको बारेमा:
सबैभन्दा पहिला, स्ट्राइकरको बायो आफ्नो बुवाको योग्य उल्लेख नगरी अपूर्ण रहनेछ। स्पष्ट रूपमा, Lasinna Traore बुबा पनि एक उत्कृष्ट फुटबल खेलाडी थिए। यद्यपि आक्रमणकर्ताले स्वीकार गरेका छन कि ऊ उसको खेल हेर्न आएको थिएन।
हुनसक्छ, उसले आफ्नो बाबुलाई मृत्युको चिसो हातमा हरायो होला। ठिकै छ, हामी कहिले पनि भन्न सक्दैनौं उसको परिवारसँग उसको अनुभवको वास्तविकता जसलाई उसले 'पिता' भनिन्छ।
Lassina Traore आमाको बारेमा:
तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि उनको आमाको मुटु भरिएको छ किनकि उनले महसुस गरिन् कि उनको एक मात्र छोरोले उनको फुटबल शक्ति पाएको छ। अवश्य पनि, टोरोरकी आमाले उनको क्यारियरको दिनमा बुर्किना फासोको राष्ट्रिय टोलीको नेतृत्व गर्‍यो, यो एउटा उपलब्धि थियो जुन उनलाई प्रतिभाशाली महिला खेलाडीको रूपमा चित्रण गर्दछ।
लासिना टोरोरका अनुसार उनकी आमा उनका बुवा भन्दा बढी प्रतिभाशाली थिए। तसर्थ, ऊ विश्वास गर्दछ कि उसको फुटबल सम्भाव्यता उनीबाट आयो। त्यसमा कुनै अचम्म छैन कि उनले जहिले पनि उनलाई एक स number्ख्या १० को रूपमा मान्दछन्, महान रचनात्मकता र प्राविधिक सीपहरूले पाएको।
Lassina Traore भाई बहिनीहरू को बारे मा:
सही समयमा, आक्रमणकर्ताले जहिले पनि आफ्ना बहिनीहरूलाई उच्च आदरमा राखेका छन। अनुसन्धानले देखाउँदछ कि लसिना टोरोरका दुई बहिनीहरू छन् जुन सम्भवतः तल देखाएको बच्चाहरूको आमा हुन सक्छ। यो राम्रो थियो यदि ऊसँग एक भाइ छ जो खेल्न सक्छ खेल को रूपमा। कसलाई थाहा छ, तिनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय टीमको लागि एक उत्तम कम्बो बनाएको हुन सक्छ।
Lassina Traore नातेदारहरूको बारेमा:
चाखलाग्दो कुरा के छ भने उसको भान्जा भाई (बर्ट्रान्ड ट्रोर) ले पनि युरोपेली शीर्ष उडानमा आफ्नो लागि नाम कमायो। निस्सन्देह, यस जीवन कहानी लेख्ने क्रममा एस्टोन भिल्लाका लागि खेल्ने लासिना र उसको भतिजाको उपलब्धिमा ट्रोर परिवारलाई गर्व छ।
हाम्रो अनुसंधान टोली अझै पनी उनको हजुरबा र हजुरआमा को पहिचान अनावरण गर्न कडा परिश्रम गरिरहेको छ। जे होस् उनका काका र काकीहरू उनीसँग सामाजिक मिडियामा पहिचान गर्न बाहिर आएनन्, उनीहरूको शुभकामनाहरू सधैं उहाँसँगै थिए।
Lassina Traore अनटोल्ड तथ्यहरू:
स्ट्राइकरको परिवारको बारेमा तपाईंलाई ज्ञान दिए पछि हामी उनको लाइफ स्टोरीको बारेमा अझ बढी सत्यता प्रस्तुत गर्दछौं जसले तपाईंलाई उनको जीवनीको पूर्ण ज्ञान लिन मद्दत गर्दछ।
तथ्य # १: जब तपाईले यो देख्नुहुन्छ, उहाँ लाखौं कमाउनुहुन्छ पश्चिम अफ्रिकी सीएएफ फ्रान्क:
निस्सन्देह, उसको व्यवसायिक रूपमा सुरु भएको ज्याला सानो छँदै पनि बुर्किनाफासो, पश्चिम अफ्रिकाका जनताका लागि ठूलो अर्थ हो।
सत्य हो, wयहाँ Lassina Traore को परिवारबाट आउँछ, औसत नागरिक around० around को आसपास कमाउँछ युरो एक महिना वास्तविकतामा, तिनीहरू 34 महिना को लागी काम गर्न आवश्यक पर्दछ (2.8 वर्ष) Lasinna एक महिना मा स collect्कलन गर्न बनाउन जब उनले एजेक्सको साथ आफ्नो वरिष्ठ क्यारियर शुरू गरे।
प्रति वर्ष € 208,320
प्रति महिना € 17,360
प्रति हप्ता € 4000
प्रति दिन € 571
प्रति घण्टा € 23
प्रति मिनेट € 0.4
प्रति सेकेन्ड € 0.007
हामीले रणनीतिक रूपमा लासिना टोरोरको कमाईको विश्लेषणलाई घडीको टिकटमा राखेका छौं। तपाईं यहाँ आउनु भएकोले आफूलाई कत्ति धेरै आयो भनेर खोज्नुहोस्।
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो Lassina Traore को बायो, यो उसले कमाएको हो।
उसको तथ्या .्कलाई आधारमा हेर्दै, स्ट्राइकरको बजार मूल्य यस बायोलाई लेख्ने क्रममा २.2.9। मिलियन डलर बराबरको रकममा गएको छ। उसको हमलाउने वृद्धिको लागि धन्यवाद, ट्रोरलाई बीचमा दर्जा दिइयो २०२० मा best० उत्कृष्ट फुटबल वंडरकिडहरू।
तथ्य # १: Lassina Traore धर्म:
सम्मानित आक्रमणकारीले समान विश्वास साझा गर्दछ एडुअर्ड मेन्डी - इस्लाम। आफूलाई गर्वका साथ मुस्लिम भनेर चिनाउन, लसिना टोरेले आफ्नो इन्स्टाग्राम पृष्ठमा उनको एउटा तस्विर पोष्ट गर्नुभयो, जसमा इस्लामी शिलालेख थियो।
फुटबलको संसार बिस्तारै परिवर्तन हुँदैछ किनकि धेरै युवाहरूले आफ्नो क्लबमा खेलको अवसरहरू पाइरहेका छन्। त्यस्तै, हाम्रो २०२० पछिल्लो एजेक्स प्रोडिजी फुटबल पुस्ताको क्लियरियन कलमा पनि प्रतिक्रिया आएको छ जहाँ युवा खेलाडीहरूले प्रभाव पार्छन्।
यस नोटमा, उनको सम्पूर्ण परिवार (विशेष गरी ट्रोरकी आमा) लगातार उनलाई प्रार्थना गरिरहेछन् कि उनी आफ्नो क्यारियरमा उत्कृष्ट होस्। हामी भविष्यको लागि तत्पर छौं जहाँ लसिना टोरोर लाइफ स्टोरीले वाक्यांश समावेश गर्दछ; "युरोपमा सर्वश्रेष्ठ आक्रमणकर्ता"।
आइकोनिक बुर्किनाब स्ट्राइकरको हाम्रो जीवनी पढ्नको लागि धन्यबाद। अहिले सम्म टोरोरको उपलब्धिमा तपाईको विचार के हो? कृपया तल तपाइँको जवाफ हाम्रो टिप्पणी सेक्सनमा छोड्नुहोस्।
पुरा नाम: लासिना चाम्स्टे साउडाइन फ्रान्क ट्रोर
निक नाम: Lassina Traore
जन्म मिति: 12th जनवरी 2001
बार्षिक तलब £ 208,320
उचाइ: १.1.83 मिटर (feet फिट)
परिमार्जित मिति: अक्टोबर,, २०१ 12
परिमार्जित मिति: अक्टोबर,, २०१ 9